Howlgallo amni xaqiijin ah oo laga fuliyay Degmada Buur-hakaba | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Howlgallo amni xaqiijin ah oo laga fuliyay Degmada Buur-hakaba
Howlgallo amni xaqiijin ah oo laga fuliyay Degmada Buur-hakaba
Buurhakaba(SONNA)-Maamulka Degmada Buur-hakaba ee Gobalka Baay ayaa faahfaahin ka bixiyay howgallo amni xaqiijin ah oo laga sameeyay deegaano hoos yimaada Degmada.
Guddoomiyaha Degmada Buur-hakaba Maxamed Nuur Ibraahim oo gordhow la hadley Radio Muqdisho ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid looga hortagayay dhagaraha ay maleegayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab, isla markaana lagu xoojinayo Nabadgelyada Degmada.
“Howlgalka waxaa laga fuliyay meel degmada u jirta 15 km, oo lagu sheegay inay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab, balse markii ay ciidamada halkaasi ku baxeen, waa ay isaga carareen kooxihii Nabad diidka ah ee deegaanka ku soo dhuuntay, mana jirto cid lagu soo qabtay” ayuu yiri Guddoomiyaha Degmada.
Mudane Maxamed Nuur Ibraahim ayaa sheegay in Degmadu aysan ka jirin adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo kuwa kale oo aas aasiga u ah nolosha beni’aadamka, waxaana uu intaa ku daray inay xoogga saarayaan sidii ay dib u soo celin lahaayeen adeegyada bulshada.
Previous articleXisaabiyaha Guud ee Qaranka oo xilka la wareegtay.+(SAWIRRO)
Next articleSidee ayey Suudaan usoo dhawaysay Cunaqabataynta Ganacsi ee laga qaaday